Ex-chiratidzo Chishandiso Fekitori | China Ex-proof Zvishandiso Vagadziri, Vatengesi
YT / YZ / GZ IP54 1/3/4/5 pini 250v / 400v Kuputika Zviratidzo Zviratidzo uye Plug
Iyo yekuputika-chiratidzo plug-in chishandiso inogona kupa kutanga-kumira uye kudzora kutendeuka kwemota munzvimbo dzine njodzi, senge kemikari indasitiri, peturu gasi chiteshi, peturu, indasitiri yemauto nedzimwe nzvimbo dzine hunyoro hwakakwira, kupisa kwakanyanya uye guruva.
Kuputika-chiratidzo Kupokana-kunokanganisa Kushanda Column
Iko kuputika-chiratidzo chekushanda ikholamu iri inoshanduka yekudzora sisitimu iyo inogona kupa vatengi vane akajairwa kana emunharaunda matunhu mayuniti kana ekuratidzira zvikamu zvine zvakakosha zvinodiwa. Isu tinopa matatu marudzi ezvivharo zvakajairwa kuti zvienderane nemamiriro matatu akasiyana ekudzora uye kuratidza. Panguva imwecheteyo, anosvika matatu maComEx makobvu anogona kusanganiswa kuti ashandiswe zvinoenderana nezvaunoda. Ukuru hwetambo inotungamira-mumusoro inogona kunge iri M20x1.5 kana M25x1.5. Mashoko acho anogona kunge ari epurasitiki kana simbi. Iyo yepurasitiki inotungamira-mumusoro yakamisikidzwa yakananga kugadzirisa, hapana chikonzero chekusimbisa iyo nati. Iyo simbi inotungamira-mumusoro inogadziriswa nesimbi pasi ndiro mubhokisi. Imwe yekushanda ikholamu inogona kuve neanopfuura maviri M20 anotungamira-mumisoro. Kugadzirira kushanda pa-saiti, yega yega epurasitiki yakavharirwa ine manhamba.
Yakanakisa Kutengesa Exd Kuputika-chiratidzo Kufa Kukanda Aluminium Junction Bhokisi
Bhokisi rekuputika-chiratidzo chekuputika-chiratidzo chejunction bhokisi modhi: BHD51- □ inoratidzirwa ne cast cast aluminium alloy shell, pamusoro pekupfira, chitarisiko chakanaka.
Yakaderera Mutengo Metric Kuputika-chiratidzo Cable Gland
Iyo inoputika-chiratidzo gland chinhu chinoputika-chiratidzo chinowanikwa pane yakakwira-inoda tambo. Iyo inogona kuiswa kune kubatana pakati pekuputika-chiratidzo tambo chiteshi uye iyo yekuputika-chiratidzo chemagetsi emagetsi. Inogona kutungamira mune tambo uye kugadzirisa chinzvimbo kuti uwane kuiswa chisimbiso uye kuputika-chiratidzo mhedzisiro. Iko kuputika-chiratidzo Kupfuura kuita, yakachengeteka uye yakavimbika chimiro, yakapusa uye nyore kumisikidza, yakakwira dziviriro nhanho uye zvimwe zvakanaka Inoshandiswa zvakanyanya mu petroleum, makemikari uye dzimwe nzvimbo dzinoda kuchengetedzwa kwemagetsi uye kuputika-chiratidzo, kunyanya chakanakira nzvimbo dzekunze uye zvikepe zvinoda nzvimbo dzemagetsi ekupupura.